Daawo xafladdii 13-guuradii Puntland ee Garoowe ka dhacdey (VIDEO) - Horseed Media
Daawo xafladdii 13-guuradii Puntland ee Garoowe ka dhacdey (VIDEO) August 2, 2011 Share this:FacebookTwitterGoogleDaawo Muuqaal (Video) HD ah oo laga soo duubey xuskii u weynaa abid ee loo dhigo dhalashadii Puntland.
Kaed says	August 3, 2011 at 13:06	Xafladdani waxay ahayd mid aad iyo aad loo soo agasimay muuqaal wacanna ka bixisay Maamulka Puntland. Waxay dadka qaar soo xasuusisay xafladihii la midka aha ee wadanka laga soo qaban jiray wixii ka horeyey burburka, kaliya waxay kaga duwaneyd waxay ka dhacday Garowe oo kaliya taasna wa a gaari doonaa iyada oo laga qabto magalooyinka waweyn ee dalka oo dhan.
Video-gani waa documetary muhiim ah wana bilowga tubta dhisitaanka Dowlad Goboleed Functional ah oo ay Puntland yeelato o at least og in la xisaabtan jiro muuqaalkuna yahay sheyga ugu muhiimsan dunida. Waa wax lagu farxo in dadka magacooda kor lagu soo xusay guud ahaan ay maanta leyihiin meel a Somali oo idil kusoo hirato laga helaayo nabad iyo nolol wacan.
mudugland says	August 3, 2011 at 10:01	asc wad salaman tahin dhamaan puntlanders and non puntlanders salan ka bacdi horta hadii an nahay reer puntland walahi waxa ina dishay qabyaalad xun ee aan iska deyno qabyaalada walahi habeen dhaweyd qudbadii uu aqriyey mudane faroole mucaarad fog baan ahaye waa iso dabcisay waayo wax yaabo macquula ayuu sheegay waxana u marag ah halkaan ayad ku heysaan waana qabyaalada.
anigu Garowe kama so jeedo balse waxan idin sheegayah Garowe hadii xaflada lagu qabto waa caasimadii Faroole ka hor ayeyna ahaan jirtey marka tolow naga daaya qabyaalada waayo qabiilkeenu wa somali dadkiinuna waa puntlanders
naga daaya qabyalada
sagaar says	August 3, 2011 at 09:15	Waxaan aad ula yaabaa webside yada somaliyeed qarkood waxay daboolka sareen xafladaa sidaa u baxada Wayn markaas ayey bedelkeda soo geliyeen qarax ka dhacay Garoowe iyo dhalashadii caydiid yaab Somalida qarkood gorma ayaa cadifada iyo qurunku ka baxayaa iyadoo 20+ sano lagu jiro jah wareer iyo dawlad la aan ilahayooy masqax iyo qalbi nadiifa Somalida dhex dhig Aamin….
Jamame says	August 3, 2011 at 08:48	Ilkacase.
Walaal Jazakallah kheyr. Wa runta dadku inuu isku mid ahayn loona baahanyahay in danta guud & wadajirka la ilaashado. Faroole wa shaqsi tegaya lkn Puntland baaqi ahaan doonto, marka waxa loo baahanyahay wadajir iyo iskuduubni.
Wa sidaad ushegte website yada Scc waxa weereren xuska 1 Aguast qaarkodna aflagaado iyo beenabur bay la soo booden, dhowr cmnts aan ku qoray wa la masaxay, marka qofka kugu mucaaradayo waxad shegtay bal hasoo booqdo websiteyadaa. Danta waxay ku jirta wadajirka maamulka haday wax ka qaldamen aan saxno isagaba wa wax waqti un ku fadhiya. Wabillaahi tawfiiq
AMSHIRE says	August 3, 2011 at 04:23	Caasimada Puntland ha loo raro Badhan City ee Gobolka Sanaag, 37 degmo bay leedahay Puntland, Badhan waxay ka mid tahay 9 degmo ee leh Golayaashii deegaanka oo u dhisan si cadaalad ah , xildhibanada Golaha deegaanka Badhan waxay ka koobanyihiin 28 xubnood, Toban xubnood waa dumar, gudoomiye ku xigeenka Golaha deegaan Badhan waxaa la dhahaa Saynab Cabdi Aaar.
Jamame says	August 3, 2011 at 08:55	Oday kkkkk
war caasimadda haddi loo raro Badhan armuu qarax iyo dilka qorsheysan rarkaas raacaa oo reer Badhan belo loo geeya. Kkkk Badhan wan jeclahay waxa ka soo jeedo fannaan reer Jamame ah lkn asal ahaan reer Badhan ah (HELLO LAASQORE)
ilkacase says	August 3, 2011 at 03:52	Marka hore waxaan Hambalyo u dirayaa shacabka reer Puntland meel kasta oo ay jogaan..
Marka xigta waxaan leeyahay.. ilaahay ha idin garab galo kolay dadka qaybna way dadaalayaan oo daacad bay ushaqaynayaan.. qaybna.. waa dad xoolo dadadeed cunaya.. adunka wadamada carabta ama africada way kajirtaa musuq maasuq.. laakin dadoow.. hal mid ogaada.. Maamul xumi maamul la aan bu dhamaa.. maamulka aan ilaashano oo xejisano.. aniga faroole isku reer manihin adeer ima ahan.. reer puntland baan ahay. waliba waxaan ahay dadka la ilaaway oo xitaa aan kulahayn hal kursi parlamaanka.. .. baan ahay marka waxaan idin leeyahay iska daaya is kalasaarsarka.. kii wax idiin noqdaa taagera ha is ciilinina hor mar w axaa lagu garaa mid nimo iyo wada jir…
waxaan rabaa in aan maamulka usheego ama dadka xaflada soo agaasimay.. kheyr allaha idin siiyo.. marka labaad.. waxaan rabaa dadka marka ay dhoola tus sameynayaan aduunka ama meel kasta fiiriya. sida bandhiga loo soo ban dhigo.. maxay tahay naagta diraca qabta oo iska dhex soconaysa mesha ciidanku marayo.. waligaa arki maysid meel bandhig lagu sameynayo oo qof shacab ahi iska soo dhex marayo.. taas inaga ilaaliya.. tan kale.. waxaad baaburta inaka qurxiya xaga.. leyrarka.. baaburka qayb baanba lahayn layrar.. kuwana fareejooyin maleh.. baaburta bandhiga waa in lasii habeyaa inta bandhigu uusan iman.. askarta.. kuwa mesha qaad ku dhex cunaya.. runtii markaan daawaday waan ka naxay waxaas oo kale wax akhlaaqda ama muqalka u ficana ma ahan enagana inooma fiicna..
waxaan rabaa gunaanad in aan dhaho walaal meshan commentiga ka bixiyay kheyr allaha idin siiyo ramadaan kariim alaha idinka aqbalo ramadaankina bil barakaysan baa lagu jiraa cayda iyo af lagaada iyo habaarku ma banaana… sida rasuulkeena suuban uu yiri.. hadii uu qof ku caayo ama ku aflagaadeeyo ama uu wax kaa sheego ugu jawaab… alahuma inii saa’im.. ilaahay wan soomanahay… marka.. plzz.. bil barakaysan baa lagu jiraa waan idin baryaya.. ilmadeeryow walaalayaalow.. wax wanagsan iyo wax is tara oo midkii khaldan hadal wanaagsan ushega si uu khaladkisa ufahmo ee yaan khalad khalad lagu sixin..
wiil bari says	August 3, 2011 at 01:39	faroole cadaal daro ayu sameeyey wayo magaladiisi ayu ku qabtay sanad guuradi puntland waxan umalaynaya puntland waa garoowe kaliya puntland kale ma jirto wayo ninkasta wu arka xaqdarata ka jirta wadanka dad badan ayaa waxy la yaa bayeey mucadarka faraha badan ee hada ka jira puntland iyo mamulada faraha badan ee kala sameeyey gudaha wadanka ma ahan dadkasu in ay xun yihi ee waa la tusay xumanta sida manta ka muqata garoole inta kalena laga tegey waa wax laga xumado run ahanti madax wenahu ma ooga in cid kaleba jirto aan ahn garoowe lkn waxan ilaahay ka baryeena madax weyne daacad ah oo dadku iyo dalku u siminyahahy
garowe 2020 says	August 3, 2011 at 00:51	Hambalyo ayaan leeyahay Maamulka dariska aannahay ee Puntland. Anigoo kuhadlaya afka maamulka SouthNugaal eelagaga dhawaaqay koonfurta Nuagaal oo ay caasimadiisu tahay Oolcurus. Waxaaan kacodsanayaa walaalaha Puntland inay tixgaliyaan aqoonsiga maamulkan madaxa banaan, iyadoo laiska kaashanayo amniga.
Kagadaalo markaan aragnay waxqabad l,aanta maamulka iyo daryeel la,aanta dowladda hadda jirta ee Puntland.
Abshir Said says	August 3, 2011 at 01:05	Oolculus mise Awrculus, bal caasimadda magaceeda sax.
AMSHIRE says	August 3, 2011 at 03:55	Awr- Culus hehhe baan u fahmay , ma Garoowe baa awr-culuz loo bixiyey oo maamul looga dhawaaqay ..Ninkan magaca Garoowe wata oo hadana maamulka Puntland aqoonsiga ka doonaya NINKA MIYIRKA QABAA MARBAA NINKA WAALANI KA QOSLIYAA!!!
Abdul says	August 3, 2011 at 00:19	Adeer Gobolka Sool ama magaalo madaxda Lascanood waxaa bixiyey oo gacanta ugaliyey waa harti, marka yaan qabiil qabiil harti loo kalo jabin. Magaalo hore ayaa sidaa faraha ka baxdey oo la dhaho Ceerigaabo magaalo madaxda Gobolka Sanaag. Marka arima ilaahay ha ha saxlo — hadeer Gobolka Sool magaalada labaad ee ugu weyn waxaa la dhahaa Caynabo maanta nin dhulbahante ah ma sheegan karo xitaa taas waxaa tusaale u ah ceerigaabo lakiin maanta waxaa soo socota hadii lago dabo tagin lascanood oo maanta dadka lagu dhex xirxirto oo loo gudbiyo xabsiyada berbera, burco iyo hargeysa ama dadka nool oo gawaarida ciidanka lagu dilo taas oo been laga sheegin karin waa lascanood iyo baadiya qofkii warka ka war hayo waa og yahay. Marka ugu danbeen Harti oo dhan ayaa ceebta huwan tahay.
Dulmidiid says	August 2, 2011 at 22:56	Aniga shaqsi ahaan Faroole ma jecli, laakiin yaan la isku qaldin Madaxweyne Faroole iyo Puntland. Maxaa yeelay Faroole waa yimid waana tagayaa gooree noqoto, laakiin Puntland way jiraysaa, dhib badana waa jiraa laakiin waa laga bixi doonaa.
Mida kale Faroole waxaan ogaaday in ay la taliyaashiisa xun yihiin. Waxaan kula talin lahaa in uu badalo la taliyaasha iyo Reeraha ka dhaadhicinaya in uu Qardho iyo Garoowe dhaafin, ee uusan iloobin in uu Qardho iyo Garoowe u aheen madaxweyne ee uu u yahay Puntland oo idil.
Puntlanda nabad haku soo celiyo markaasaan si fiican u dabaal dageenaa.
Dabaaldagaana aadbaan ugu faraxsanahay.
m000771 says	August 2, 2011 at 22:18	Dunida oo dhan,maantay waxaa ay ku jirtaa gunti isko giijin,marka dowlada puntland ee somalia,oo aano ognahay halka dhaqaalaheedo marayo,ma haboona in hantida umadda waxaan waxba ku soo kurdhinayn,lago bixiyo.imisa reer puntland ah ayaa wax loogo qaban lahaa dhaqaalahaasi iyo xooga ku baxay dabaaldagan,marnaba ma aha wax inaba wax dar u leh dadka iyo dhowrista hantida umadda reer puntland oo maantay la baaxaa degayaa dhibaatooyin fara badan,oo leh xag dhaqaale caafimaad wax barasho,aminga oo aan wanaagsanayn,burcad badeeda oo iyana ah dhibaato aan waxba laga qaban,marka maxaa loo dabaaldagaa,oo qarash loogo,bixiyaa iyadoo la heli karo in la xuso,balse aan wax qarash ah oo ah hantida umadda ka dhaxaysa aan lago bixin,waxaa ay ahaanlahayd maalin reer puntland inta dowlada u shaqaysa,iyo haddi ay jaamacadaha iyo iskuulado ay furanyihiin,ay maalintaasi ka nastaan,waxbarashada.war caqligo ha shaqeeyo,oo dhaqaalaha umadda ayaan lago bixin damaashaad iyo sanadguuraa.
hanadjirac says	August 2, 2011 at 20:23	SSC Maakhir State iyo Raascayrland waxaan leeyahay waa inaad “buur ahaataa ama buur ku tiirsanaantaa”, wixii intaas u dhexeeyaa waa lagu lumaa waana lagu wareeraa.
Cadawga Puntland ha dhaco cagta hoostiisa
Puntland waxaa muraayadda, caqliga, siyaasadda, dhaqaale, iyo bulshadda Soomaaliya, waxaan leeyahay dadkiina dhinac ka raaca
asad says	August 2, 2011 at 22:41	adeer anaga buur ah wad ogayd casharki aan u dhignay snm dagaalki kalshaale marka sidi inagumeedki ha u hadlin dad siman ayanu nahay marka sidi nin ragg ah ila hadal puqland aad sheegayso ada dhistay aday wax ku tahay adigi cadowgaga u nool anigu puqland= ssdf ayan u aqana iyo in magan u ah oo ay ku shaqaystan dhulkayagana kama taliso waxna kama ah ssc guul baa leyahay
Saahid Qamaan says	August 2, 2011 at 20:15	Wa calaykum salaam
Walaal Waranle sii wanaagsan ayaad u dhigtay hadalkaagu. Puntland dheel kuma imaan, dheef iyo halgan bey ku timi. Dad baa u dhintay siday mar uun u arkaan hanaqaad iyo mira dhalkeeda. Caruura baa ku aaba waayey, rag baa u xubin beelay, hooyooyin baa wiilali iyo gabdhaba kaga dhinteen.
Xalay bey ahayd markii gabadh u hadlaysay dalada PUNSAA ee Bulsha Rayidku ku bahoobeen, sida qurxoon u baanisay waxa ruuxa muwaadinka ahi looga baahanyahay. Ma’aha ruuxa u dhashay Puntland inuu afkaar/dan dad kale oo ajaaniib/shisheeye ahi leeyahiin inuu u shaqeeyo, dowladeena waa inaanu gacan qabanaa, waa inaanu dhaliilaheeda tusnaa, dariiq beyse leedahay loo maro walaalayaal.
Hadaad aragtid ruux iska ordaayo oo aadan ogeen wuxu rabo iska socdo uun, ogaada kaa waa mid wax aan wanaagsanayn idinla rabin oo hoogiina u jooga.
Xalay buu Suldaan Saciid Ismaciil lahaa anaga ayaa dowlad iska dhigi karno waa inaanu isku kalsoonaa dareenka wadanimada aanu ka dhabeeynaa.
Puntland maanta cid kaga horeeso majirto xag horumar, xag dhaqaale, xag bulsho, xag ciidan inaga uun baa is ciili karno. Waad aragtiin sharafta iyo quruxda naga muuqata maanta, isha Soomaalida inaanu nahay, dadka lagu harsado laga dambeeyo Soomaliya inaga in aanu nahay. Wanaageena cidna ma qarin karayso. Wixii dhaliil ah waa in la sheegaa sida loo saxo laakin sida gabadh xalay buraanburtay xaflada 1da August ee Madaxtooyada tiri:
Puntlandeey dagnaansho baa dowlad lagu gaaraaye yaan la degdegin.
Puntland waa horseedka iyo horumoodka Soomaaliya cid naga wanaagsani majirto kii xumaan qabow amase wax kala isku qarin ogow in lagu arki, ama magac reer iska dhig ama qof dad kale u doodaya iska dhig, bulshada wey ku aragtaa.
Sida M/weynaheenu yiri: “Bomb yar oo jidka hareerahiisa la dhigo iyo ruux la toogto, Puntland u joojin mayso” siyaasadaha ka dambeeyana waanu garan. Markaa hadalkayga waxan ku soo gunaanadi “Qof wax aan jirin soo qorow ama xaasid ahow, Ogow inaysan Puntland ku burburayn sadaro aad ku soo qortid horseed ama meel kale”.
Warbaahinta iyada dalka dhisi karto ama dumin karto, kii xumaan u nool iyo mas’uulyiin wax ka sheegoodal, ha ogaado in maalinta qiyaamo lala xisaabtami uuna dembi ku mudaysan isku dirka ama hadalka qaabka darani dad nabad ku taamayo ula dul joogo. Caqli xuma ha u geeso, ama jahli ama xaasidnimo iyo dadnima xuma uu u dhashay. Ballo u yeer in la noqodo waa laga fiicanyahay isku kalsoonidana waa waxa ummadaha isku dhaafeen. Barwaaqada Puntland taal ee Soomaalida kale kaga hormareen waa kalsoonidaa ey dheeryahiin walaalahooda kale ee ku hareersan.
Waana neceebka/maseerka Puntland, halka uu ka saldhigtay. Markaa yaan loo joojin keena xun shaqada iyo toosinta dowlada gacma midaysan halaga qeyb qaato
hanadjirac says	August 2, 2011 at 20:15	ASC, Ramadaan Mubaarak Dhamaan Muslimiinta oo idil iyo Bahda Horseedmediaba.
Maasha allaah waa wax Illaahay lagu mahadiyo horumarka nabadda barwaaqadda Illaahay ina siiyey haddii aynu nahay reer Puntland waa tusaale taariikhda Soomaaliya baal dahab ka geli doonaa.
Dhamaan madaxdsare ee Maamul Goboleedka Puntlad aad bey u mahadsanyihiin run ahaantii waxay guteen waajibaadkii saarnaa ee ay dadka iyo dalka u hayeen, aad baanu ugu faraxsanahay haddii aanu shacabweynaha reer Puntland, Puntland waxay maanta cagta saartay wadaadii horumarka Soomaaliyana lagu raadin lahaa GUUL baan leeyahay Puntland.
Waxaan rabaa dadka Madaxweynaha Puntland jaaifeynaya oo meeshan qoraalka ku soo qoray waxaan leeyahay adeer Madaxweyne Faroole waa wadani dalkiisa jecel ee nin shaqo tag ah oo marba meeshii ay ka bisishahay u orday wado uma hayo, haddii aad reer ssc tihiin uguma aydaan horayn dad wareeray ee markaad yaabtaan koonfuurta Soomaaliya eega, Xaabsade baa ka weyn Faroole intii la doona waadna aragtaan meeshuu u shaqo tegey iyo dhibta uu dadkiisa ku hayo, haddii marka reer ssc iyo inta la caqli ahi ay talo hayaan ha muuqdeen hana xoroobeen, waxaa i soo haray odaygii barlamaanka ka hadlay ma maxumayn laakiin Madaxweyne Faroole baa naga badiya oo madasha kula hadlay, Walaalihiisna waa kuwa ciidanka Soomaaliland laascaanood hor booda oo ku laaya shacabka Dhulbahante. VIVA Horseedmedia
faay_ says	August 2, 2011 at 19:47	asc
Hambalyo guud ahaan shacabka reer puntland iyo madaxdoodeena
Puntland horumar iyo nabad insha alaah guuuuuul puntland
HORSEDMEDIA WAA KU MAHADSANTIHIIN VIDEO MEESHAA KA WADA U SHAQEYNTA SHACABKIINA THANKS
Waranle says	August 2, 2011 at 19:35	Salamu aleykum
21 Sano ka hor bey aheyd malin ramadaan ah.. maanta oo kale markii Xamar guryaha dadka inta loogu galo, dhafoorka laga tooganayay, naagtii la kufsanayay. Dadkii malintaas sidaas lagu sameeynayay, dad Darood bey ahayeen, inta badana dadkii yiri “Ma siyaad bare baan raacnaa” beey ahayeen.
Dadkaasna waa la ogyahay dad MJ beey ahaayeen. Marka waa malinta ninka soomanaa aan la dhaafin, islaanta 60 jirka ahna la kufsanayay, waa maalinta dadkii masaakinta ahaa ee kismaayo u caraaray laga dabo tagaayay.. waana maalinta Galkacyo olo´leeyso…..
Malintaas ninkii joogay baa maanta oogaan kara waxeey nabadu tahay…
Puntland 13 sano dad iyo duunyo ayaa ku badbaadey. Siyaasada guud ee Puntland fikrad gooni ah waa ka qabi kartaa, Laakin nin walbo waa inuu ogaada tiirka Puntland waxuu u tagan yahay.
Ina gumeed meel hoose ka hadlaya iyo nin sida naagaha oo kale u hiinasaya, raga taladiisa mala.
Puntland rag baa u dhintay, nabadana ku ma imaan sahal!.
framtiden says	August 2, 2011 at 19:56	Qabyaaladu ma wanaagsana walal, Laakinse Puntland muqadaskeeda dadka hoos u dhigaya maanta maalin aan ahayn bay ka shalayn doonan. Inaga waxa ina ku waajiba sidii aan dadkeena uga dhigi lahayn dad sinan iyo qadarin iskula nool. sidii ay umada kale u ixtiraami lahaaeen, sidii ay bulshada caalamka aan ula tartami lahayn. Qabyaaladu walal ilaahay waa looga dheerada ee shaydaanka iska naar, waan dareemi kara sida marka dhankaasi loo eego ay xanuun badan tahay lakinse dadkaasi iyo intii ku taagertayba ilahay ba axisaab u hortaal.
ogaal says	August 2, 2011 at 19:28	Asad walaal waqti la is qabqabsado maaha maanta waa maalin farxadeed waa 1dii bisha barakaysnayd iyo sannad guuraadii 13aad ee puntland.
Nooloow nooloow puntland
Nooloow nooloow madaxweynaheeda xafidahullah C/raxmaan Farole
Noolaada reer puntland oo dhan
asad says	August 2, 2011 at 22:46	Aniigu ssc lander ban ahay pintland anigu wax shaqa ah kuma lihi kamana mid ihii dhulkaygana majoogto waxan kalo u aqana maamul xaraan ah oo qabiil dhistay dadka u shaqeyana ay magan u yihiin marka maxa la isku haya wa nothiing
asad says	August 2, 2011 at 18:19	framtiden sxb dadku puntland ma wada aha mamulkana dhulkayga kama taliyo marka side puntland ku noqona ma af kaliya saxafada ssc wa xor way qorayan wixi ay doonaan iyaga u madax banaan waxa anshax xuma ah inaad qabiil iyo dad aad si gaar ah u caydo wa wax ad looga xumaado anago ssc land ayan nahay ogow puntland qabiil ba leeh anaguna tayada leenahay kuna faraxsanahay
framtiden says	August 2, 2011 at 19:13	Asad walal horta anigu qabiil ma aan caayin ha igu gefin, shaqsina gef kuma aan samaynoo HRM baaba iga tuuri lahayd. Walal Ilaahay halaga cabsado dhanka wanaaga ha loo fekero markasta. 1998 baa Puntland la dhisay Sool isimadeda iyo degmada Buhoodle waa ku irayn shirka goormay ka baxayn kollay waa wax aniga iga dambeyey. Adigaa Asad ii sharaxaya goorta laga baxay iyo sababta.
Ahmett says	August 3, 2011 at 07:21	Framtiden!… Sxboow horta dhowr sanno baa wax qoreysey, Ilaa iyo Maalintii Faroole amase Cadde Musse kala wareegay, Labadaas Maamulba waad ku kacsaneyd, Walow hadana aad marmar u hadasho Qaab Qabiil oo aad dhahdo, Puntland waa MJ,… Ninyahow mid aan ku weydiiyo?
Abti ma NIn Weyn baa tahey around 45 years, walaahi waxaa u malayaa in dadka Comments halakan wax ku qora, in ee under 30 wada yahiin… Lakiinse Waxaa ii cadaatey in aad ka weyntahay 45 Shan..
Adeeroow Bil Ramadaan baa lagu jidhaa… Dawlad xumi, Dawlad La’aan bee dhantaa? mawaxaa rabtaa in sida Konfurta leysku cuno… mida sadexaad.. Qof Walba maalin buu leeyahey, aduunkuna waa wareegto…. wait ur time man… Qof ha aflagaadeyn qofna ha caayin!….
waxaase aamisanahay in Dawlad aan dareemey Xiligii uu qabtey DR Faroole.. awalse waxaan u heystey… Bilaa Dawlad meeshu…. Tii Abdullahi Yey waxey aheyd Buushash ka adag, Tii Cade Musse waxey aheyd lama yaqaan… Faroole Xiriirka arimaha Dibada aad buu u wanaajiyey inta uu hayey xukunka.. sxb marka be positive
AMSHIRE says	August 2, 2011 at 16:42	Hambalyo wanaagsan dhamaan shacabka reer Puntland.. wixii xalflad caalmka ka dhacaysay sanadguurdii Puntland waxaa ugu foolxumayd, markii sawirka faroole Garoowe ciyaaalka la yidhi qaada. ciyaalkaasi la khalday oo la yidhi qaada sawirka faroole beri markay khudbadiisii dhagaystaan oo uu ku caayey xildhibaanka ka waran ciyaalkaas beri markay caqliyeystaan!
yaan la siku khaldin xafladaha kale ee dunida ka dhacaayey waxaa loogu tala galay inay si habsami ah oo soo bandhigo lagawada qaybqaato muxaafid iyo mucaaradba.. faroole iyo gudidii loo saaray inay xaflad ku mamausaan 13 sanadguurada Puntland waa ku fashilmeen, waxayna noo soo bandhigeen meel aan ciidan joogin meel aan lagu soo bandhigin quwada puntland oo ay ka muuqato kala dadaaasho aad u baaxad wayn… wxaa aad u yaab badan 2 suug iyo 1 pm hubkii difaaca puntland, waxaad somali tusteen idinka ka qooma mayndoona..
@ Faramtiden adigu weligaa waxaad qabtay cuqdada Gobolka Sanaag iyo reer Sool— Orod faroole u niiki dee ma niikiyaan reer Sanaag , hadii garoowe maanta joogi lahaayeen oo kula dabaal degi lahayeen dayacnaanta kaa muuqatay kaama muuqateeen…
framtiden says	August 2, 2011 at 17:30	Walal ha dambaabin!!! Caydu waa shay xaaran ah oo waliba daciifnimo ah. Walal anigu waxan jeclahay in aan sheego wixii khaldan ee cidna xumaan uma hayo. Sanaag iyo Sool adigu uma ahid afhayeen dadkana kama xigtid taasi ogow Puntland dadkeedu meel makala laha. waxa aan maagayo waa saxafada qaarkood ee magaca goboladasi ku hadala. HRM hadii aad wax ka sheegtid kuma aan odhan karo waxad qabtaa cuqdad Nugaal iyo karkaar ee walal is daji oo inta aadan wax qorin hubso oo fahan waxa laga wado. dhinaca wanaaga waligaa raac wax walba waxay ku xiran tahay sida aad adigu u fasirato.
AMSHIRE says	August 2, 2011 at 17:44	Framtiden… Waan ka rali gelin sxb , Waxaad jeceshahay in aad sheegto xor baad u tahay Puntland kaama xigo, gobol ilaa min tuulo rayigaaga waad ku cabiri kartaa waxna waad ka sheegi kartaa Thank you!
Abdi Hanad says	August 2, 2011 at 15:53	Mahad celin Horseedmedia.net
Hambalyo Hambalyo Hamblayo dhamaan shacab weeynaha iyo Dowlada Puntland sanadkan sanadkiisa illah nabad iyo barwaaqo ha nagu simo.
Dabaaldagaan wuxuu na soo xasuusiyay bari samaadkii.
Muwaadin says	August 2, 2011 at 15:52	hambalyo sanadguuro wanaagsan horseedmedia aad ayaan idiinkaga mahadcelinaynaa sida xilkasnimada leh aad noosoogarsiisen video gaan aadka uquruxda badan shcbigareer puntlandna kubeeraya wadaniyad aad uweyn iyo in ay kaqayb qaatan horumarka wadankooda marlabaad horseedmedia mahad gaara allaah ha inoo dhowro dhulkeena nabad ha inookuwaarsho aamin aamin
framtiden says	August 2, 2011 at 15:38	Waaw aad ayey u qurux badantahay. waad ku mahadsantihin HRM iyo PDRC sida wanaagsan oo aad noogu sahashayn in aan daawano.
Waxan kale oo aan maanta rabaa in aan dadka qaarkiis u sheego. Wargays-yada qaarkood gaar ahaan kuwa ka soo baxa gobolada Sool, Sanaag intooda badan(2-3 mooyee) waxay isku afgartayn in ay Xusin sanad guuradaan iyo in ay la qaybsadaan shacabka Puntland farxada waxa intaa u sii dheer in ay sheegaan oo kaliya xumaanta. sax waad sheegi kartaa wixii xun laakinse hadii aad xumaanta kaliya aad iska sheegtid oo ad puntland ka dhigtid shaqsi ama reer ogow in xumaantu adiga kugu soo hoos noqon. waxan u arkaa dadkaasi aysan ahayn mucaarad ee ay yihiin kuwa ka xun Magaca Puntland iyo inta sheegataba. walal wax waa la mucaaradi karaa oo aniguba dowlada hadda talada haysa siday wax u wado ulama dhacsani waxaana jeclahay in wax la dhiso laakinse maanta oo kale uma baahna in caloosha wax la isugu qabto ee waxa wanagasan in la isugu hambalyeeyo 1-Augost. waa maalin aan yeelanay ciidan, baarlamaan, guurti, wasiiro. magacaynuna kor u kacay. Runtii aad baan uga xumahay sida walalahay ay wax ku raadinayaan, waxna u khaldayaan. dad badan oo aan anigu ka mid ahay baa jira oo raba in goboladaasi iyo deeganada puntland oo dhan cadaalad siman laga wada helo lakinse ma aha in sidaan lagu raadsho. waa in lagu raadsho muqadiska Puntland. si kastaba ha,ahaato waxan leeyahay shacabka Puntland muxafid iyo muacaradba waxad ogaataan Puntland hadii aysan jirin in aad adna qiimo lahaateen.
framtiden says	August 2, 2011 at 15:02	iyo sidaan u raadinaayey in aan arko Video laga duubay xaflada Garowe ka dhacday. sawiro aad u qurux badan baan arkay laakinse Video waan u baahanahay waana ina ka sugaynaa HRM.
HRM waxad tihin shaqaalo wanaagsan oo raba in aad dadkiina ka baahi tirtaan adeeg kasta oo saxaafadeed. waxan idin rajayn in aad hormarkiinu uu sii kordho sanadka kale.